गज्जब खबर अफ द इयर - गजु Real - साप्ताहिक
१. माक्र्सवाददेखि मासुभातसम्म
यो वर्ष का. बाबुराम भट्टराई अज्जब वर्षका गज्जब व्यक्ति बन्न सफल भए । माओवादी विचारलाई अचार बनाएर नयाँ शक्ति विचारधारामा पदार्पण गरेपछि उनी गज्जब व्यक्ति अफ द इयर बन्न पुगेको गजुरियल ठम्याइ छ । नेपाली राजनीतिमा बाबुराम सरलाई माक्र्सवादको प्रोफेसरजस्तै मानिन्थ्यो । माओवादको त उहाँ मूल पुरहित नै हुनुहुन्थ्यो ।
तर एक्कासी आफ्नो परम्परागत सिद्धान्तलाई त्रिशूलीमा हरिॐ श्वाहा पार्नुभयो । आदर्शलाई नयाँ शक्तिवादमा मिसमास पार्नुभयो । बाबुराम सरको चमत्कारी परिवर्तनले उहाँलाई गुरु मान्नेमात्र होइन, गोरु ठान्नेहरू पनि ट्वा परे । बाबुराम सरको यो परिवर्तनलाई कोही सैद्धान्तिक स्खलन मान्छन् भने कोही माक्र्सवादलाई मासुभातसँग सट्टापट्टा गरेको भन्छन् । जेसुकै भए पनि माओवादबाट ‘नोमाओवाद’ मा जाने बाबुराम सरको कदमलाई यो गजुरियल गज्जब खबर अफ द इयर घोषणा गर्छ ।
२. जोडमदेखि फोरमसम्म
अशोक राई दाजु र उपेन्द्र अंकलको पार्टी एकता पनि गज्जब खबर अफ द इयर भएको गजुरियल ठम्याइ छ । संघीय समाजवादी र मधेसी फोरमको एकतापछि विश्लेषक यो ठम्याइमा पुगेको हो । अशोक दाइ देशको कुरा गर्थे, उपेन्द्र काका मधेसको कुरा गर्थे । यी दुई शक्तिलाई मिलाएर संघीय समाजवादी फोरम बनेपछि देश र मधेसबीच टुटेको प्रेम जोडिने अपेक्षा सबैले गरेका थिए ।
तर, अहिले अशोक दाइको चर्चा न संघीयमा सुनिन्छ न त फोरममा सुनिन्छ । बरु उपेन्द्र काका पहिलेभन्दा बढी दिल्ली–काठमाडौंको यात्रामा देखिन्छन् । अशोक दाजु खै कता पो हुनुहुन्छ कुन्नी † आशालाग्दो केटो जेठाजु पर्‍यो भनेजस्तो आशालाग्दा नेता यता न उता भएकाले पनि यो गज्जब खबर अफ द इयर बन्न पुगेको हो ।
३. जन्ती परिषद्को बरियता विवाद
मन्त्री भन्नाले देश र जनताको चिन्ता मनैदेखि लिने पदलाई बुझिन्छ । जन्ती भन्नाले भोजभतेर र राम रमाइलोलाई बुझिन्छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको बरियता विवाद विवाहमा जाने जन्तीको भन्दा फरक छैन । दुई उप–प्रधानमन्त्रीबीचको तँ ठूलो कि म ठूलो भन्ने विवादलाई हेर्दा उनीहरूलाई मन्त्री होइन, जन्ती मान्नुपर्ने देखिन्छ र, यो मन्त्रिपरिषद्लाई जन्तिपरिषद् ठान्नु पर्ने देखिन्छ । जहाँसम्म यो घटना कसरी गज्जब समाचार बन्यो भन्ने प्रश्न छ, देश बनाउने कुरामा होइन, दुई उप–प्रधानमन्त्रीबीच तिमी एक नम्बर कि म एक नम्बर भन्ने कुरामा लफडा भएको छ, त्यो पनि सार्वजनिक स्थलमा । यस्तो घटना संसारमा बिरलै हुने गरेकाले यो काण्ड गज्जब खबर अफ द इयर भएको गजुरियल ठम्याइ छ ।
४. लोकमानको जागमन
लोकमान कार्की, नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक प्रिय नाम हो । प्रिय यस अर्थमा कि कैले प्रियको अगाडि लोक राखे भने कसैले अलोक राखे । अख्तियारको प्रमुख लोकमान कसैका लागि आश थिए भने धेरैका लागि त्रास थिए तर लास्टमा न आशा गर्नेले सोचे जसरी ठूला भ्रष्टलाई भकुर्न सके न त त्रासमा बसे जसरी लोकतन्त्रमाथि कू गर्न नै सके † लोकमान काण्ड हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएकाले लोकमानको जागमन गज्जब खबर अफ द इयर भएको ठम्याइ छ ।
उखान भन्नासाथ अहिले ओली बुझिन्छ । ओलीको उखानलाई गोलीसँग तुलना गरिन्छ । समर्थकका लागि उनको उखान राष्ट्रवादको शंख हो । विरोधीका लागि खोक्रोवादको घण्ट हो । आ–आफ्ना तर्क होलान यस विषयमा तर ओलीको उखानले कसैलाई सिटामोलको गोलीको झैं काम गर्छ भने कसैलाई बन्दुकको गोलीले जस्तो पनि हुन्छ । जे भए पनि ओलीको उखानले चारैतिर आतंक फैलाएको छ ।
६. देश खारेजीको खतरा
हुन त यो खबर गज्जब अफ द विक भने पनि हुन्छ । धेरै पुरानो भएको छैन हिसिला दिज्यूको जिब्रो चिप्लिएको । आदेश खारेज गर भन्न खोज्दा देश खारेज गर भनिएपछि अज्जब नेतृको गज्जब चर्चा चुलिएको हो । यसले दुईवटा कुराको गज्जबता कायम गर्‍यो । पहिलो, जिब्रो ठेगानमा नराख्दा मान्छे पछारिन सक्दो रहेछ । अर्को, नेता बेहोस भएपछि कति सम्मको हदमा झर्दा रहेछन् भन्ने कुरा †
यसबाहेक डिभी प्रेमीका लागि ट्रम्पको जित आतंक, पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीको घोषणा, क्रान्तिकारी कमरेड रेखा थापाको थाप्रपा जागमन, रन्जित रेको नियमित सक्रियता, पशुपति शमशेरको टाउकोमा आफ्नै पार्टीको सरकारको लाठी प्रहार, सरकारको विरोधमा उप–प्रधानमन्त्री कमल थापाको धर्ना, गीत रच्ने कोमलको टाउकोमा प्रहरीको डन्डा आक्रमणजस्ता कुरा पनि गज्जब खबर अफ द इयर रहेको गजुरियल ठम्याइ छ ।